The LG G4 na oru na a pụrụ iche nkwalite na ụma akwụkwọ ikike | Gam akporosis
Na blọọgụ anyị abụghị oge mbụ anyị na-ekwu maka nkwalite na ụwa mkpanaka. N'ezie, n'ihe banyere LG enwere ọtụtụ nhọrọ ebe ọ bụ na ha na-etinye aka na ahịa na ahịa LG G3. Agbanyeghị, ihe ọhụụ amụrụ n'afọ gara aga adịghị ka ọ bụ atụmatụ ga-adaba na nchefu, kama ọ bụ nke ahụ. N'ezie, LG G4 na-aga ịmalite igba egbe ya na omume nkwado nke na-emetụta ụfọdụ n'ime ndị Fans na-anwa ya iji nye echiche nke ha otu ọnwa.
Agbanyeghị, ọ gaghị adịrị ndị niile chọrọ ịnweta ule nke LG G4 na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ naanị maka ndị mbụ rịọrọ ya, ma ọ bụ naanị ná mba ebe ọ dị. Spain abụghị akụkụ nke ha dịka anyị gwara gị na blọgụ anyị. Mana o doro anya, site na LG ha chọkwara ka ndị Fans ụlọ ha nwee ọgwụgwọ pụrụ iche. N'ezie, ha kwuputara nkwalite pụrụ iche maka ahịa Korea nke ndị kpebiri iburu ya ụzọ, nwere ihe nrite pụrụ iche. Na nke a, agbatiri akwụkwọ ikike.
Iji ghọta nke a nkwalite pụrụ iche sitere na LG, nke na-aga n'ihu n'ahịrị nke ndị anyị ahụlarị na LG G3, yana otu LG G4 tupu ya amalite, ị ga-aghọta ụbọchị ndị dị na nke a. N'otu aka, mmemme ngosipụta nke LG G4 ga-abụ nke Eprel 28 a. Mana ndị ọrụ agaghị enwe ike ịzụta LG G4 na ụlọ ahịa ruo mgbe Mee 31. Ọnwa nchere ahụ pụtara na nye ọtụtụ, ndoputa nkwalite ahụ enweghị isi. Na kpọmkwem iji gbalịa ịgbanwe arụmụka ahụ, a mụrụ amụma ọhụrụ nke LG na South Korea.
LG G4 na mgbakwunye akwụkwọ ikike naanị maka nke mbụ
na ọrụ na-edebe LG G4 Tupu ụbọchị a ga-ebido ya na Korea, ya bụ, n’agbata Eprel 28 na Mee 31, ha ga-ahụ etu akara ahụ si emekwu ntakịrị ka ekele ha maka mmegharị ahụ. N'otu aka, ha niile ga-agụnye nnwere onwe na-anọchi anya ihuenyo ma ọ bụrụ na ọ gbajie. Ọ bụrụ na anyị echee na nke a bụ otu n'ime mmebi a na-ahụkarị, yana kwa nke kachasị ọnụ nke na-anaghị akwụkarị ụgwọ na nkwa ahụ, ọ bụ ezigbo ozi ọma, yana enweghị obi abụọ, ụzọ iji kwalite ndoputa LG LG.
Mana maka ndị na-anaghị ele ya anya dị oke mkpa ịtụ anya ihe ọghọm nwere ike ibute na njedebe ha, nke a abụghị naanị ihe ijuanya nke LG chọrọ iju ndị na-ede akwụkwọ tupu ha ẹkedori LG G4. Ha ga-ewere microSD 64GB iji mee ka ebe nchekwa nke ekwentị ha buru ibu iji chekwaa ihe niile ị nwere ike iche.
Ihe anyị na-amaghị bụ ma ọ bụrụ na LG na-ezube ịgbasa nkwalite a karịa ókèala Korea, ma ọ bụ ọ bụrụ naanị na ọ ga-abụ ụzọ e mere iji gbaa ahịa nke LG G4 n'ala nna ya. Nye m, eziokwu bụ, ọ ga-adị ka ọ dị mma ka ọ bịakwa Spen kedu ka ị si hụ ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G4 na-ebupụta nkwado pụrụ iche yana akwụkwọ ikike ọzọ